२५६०औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा जेठ ६ र ७ गते काठमाडाँै र ८ गते लुम्बिनीमा नेपालद्वारा गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘बुद्धका बारेमा फैलाइएका सारा भ्रम निवारण हुने’ दाबी सरकार प्रमुखद्वारा गरिएको छ । जब सरकार प्रमुखबाट नै त्यस्ता विचार सार्वजनिक हुन्छन्, गरिन्छन् तब ‘भ्रम’ रहेको कुरा स्वतः स्वीकारिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । नत्र बुद्धका बारेमा त्यस्तो कुनै भ्रम छैन । केही लेखकका अज्ञानता र नेपालका जिम्मेवार निकायमा रहेका गैरजिम्मेवार व्यक्ति र शक्तिको अहंकारको दुरूपयोगले मात्रै त्यस्तो देखेको र लेखेको हो । यसले सामान्य विवादलाई पनि असामान्य बनाउन खोजेको छ । त्यो असामान्य बनाउन गरेको दुस्प्रयासलाई सामान्यरूपमा ल्याउनका लागि पनि गौतम बुद्ध सार्थक माध्यम हुनसक्छन् मेलमिलापका । नेपालका राष्ट्रिय विभूति एवं विश्वकै लागि महामानव गौतम बुद्ध ः भारत र चीनका लागि उत्तिकै प्रिय छन् र छन् मिलाउने आधार पनि । चाहेमा, गरेमा योपल्ट त्यसको सदुपयोग गरी बिग्रेको सम्बन्ध सपार्न सकिन्छ ।
हामीले माने वा नमाने पनि नेपाल र भारतका बीचमा अहिले शीतयुद्धको जस्तो अवस्था छ । त्यसमा उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन पनि अघोषितरूपमा तानिंँदैछ । नेपालको संविधान, सरकार र यहाँका राजनीतिक दल, प्रशासक र सुरक्षा निकायले गर्ने हरेक क्रियाकलापको सूक्ष्म अध्ययन हुन्छ नै । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले यो वा त्यो कित्तामा गएर अर्को पक्षबाट पनि उत्तिकै साथ र सहयोग लिनसक्ने छुट दिएको छैन तर गौतम बुद्धमा मात्रै त्यस्ता महानता आदर्श र आधार छन्, जसले तीनवटै देशलाई एकै कित्तामा ल्याउन सक्छन् । ठस्किएका मित्रका बीचमा मिलन गराउन सक्छन् । अब हाम्रो दिमाग त्यतातिर लगाउन पर्छ ।
पच्चीस सय वर्ष पहिले गौतम बुद्ध जन्मेको नेपालको लुम्बिनीमै हो भन्ने विषयमा कसैको विमति छैन । त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यहाँका विद्वान्का बीचमा पनि एकमत छ । केही क्षुद्र लेखकलाई उति महìव दिनु पनि हुँदैन । गतसाल नेपालमा आएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीले सदनमा गरेको सम्बोधनमा ‘बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन्’ भन्दा हाम्रा सभासदहरूले ताली पडकाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । यहाँको मनोभावना बुझेर उनले बोले, ताली पाए । केही विदेशी लेखकले अज्ञानतावस लेखेका र प्रकाशित गरेका पुस्तक भेटेपछि हाम्रो पक्षबाट सही कुराको जानकारी गराएर सच्याउने दिशातिर लाग्न र लगाउनभन्दा त्यही गलत पुस्तकको प्रचार गर्ने काम भयो । त्यसैले भ्रम उत्पन्न भएको हो, अरूले हैन । यसलाई त्यसभन्दा पर लैजाँदा कसैलाई पनि फाइदा छैन ।
रह्यो कपिलवस्तुको कुरा । त्यसमा पनि विवाद गर्ने ठाउँ देखिंँदैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सीमानानुसार प्राचीन कपिलवस्तुको आधाभन्दा बढी दक्षिणी भू–भाग भारततिर प¥यो । अनि बुद्धका चारधाममध्ये बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरजस्ता महìवपूर्ण तीनधाम र वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती आदि पनि उतैका भए । नेपालतिर लुम्बिनी, प्राचीन कपिलवस्तुको राजप्रसाद तिलौराकोट, देवदह र रामग्रम परे । यस विषयमा हामीले बोल्न र लेख्नभन्दा सम्बन्धित ठाउँमा रहेका प्राचीन स्मारकहरू प्रमाणका रूपमा विद्यमान छन् । ती बोल्छन् र कुनै भ्रम भए आफैं निवारण गर्छन् । हामी बोल्नै पर्दैन । कतिपय विषयमा नबोलीकन पनि प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । मौन कूटनीति बोलीभन्दा बलियो हुन्छ । उत्तरी छिमेकीबाट सिक्नुपर्ने विषय हो यो । भारतको पिप्रहवा र गनवरियालाई लिएर केही भ्रम फैलाउन खोजिए पनि त्यसको प्रतिवाद सजिलै गर्न सकिन्छ । हामीले नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले आफैंँ गर्छ । त्यहाँ रहेका स्मारकहरू प्राचीन कपिलवस्तुभित्रकै हुन् । सुगौली सन्धिपछि भारतीय भूमिमा परेका हुन् । त्यसैले नक्कली भन्न मिल्दैन । हामीले यताबाट नक्कली भनेर चिढाउँदा उताकाले पनि त्यस्तै तरिकाले प्रतिवाद गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।
सन् ६० को दशकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव ऊ थान्त बुद्ध धर्मावलम्बी हुनाले लुम्बिनी विकासको योजना बनेको हो । जापानी प्रोफेसर केञ्जो टाँगेले गुरु योजना बनाए । लुम्बिनीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समिति पनि बने, बनाए । नेपालीका हातमा आएपछि बिग्रदै गएको हो । यस्ता कुरा धेरै छन् । भर्खरैको कुरा गर्ने हो भने पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन(युनेस्को)ले जापान सरकारको सहयोग लिएर लुम्बिनी, कपिलवस्तु र रामग्राममा उत्खनन् गरायो । बेलायतको डुर्हाम विश्वविद्यालय र स्टर्लिङ्ग विश्वविद्यालयसहित अन्य देशका शोधकर्ताहरू पनि खुब लागे । उत्खनन् एवं अन्वेषणबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा विश्वविख्यात विषयविद्हरू आफैँ यतिविधि उत्साहित छन् कि हामी नेपालीले बोल्नै पर्दैन । तत्पश्चात् बर्मा, थाइलैण्ड, श्रीलङ्का र जापानका राजदूतले प्राचीन कपिलवस्तुको भ्रमण गरे । युनेस्कोकी महानिर्देशक आइन् । पर्यटकको धुइरो छ दिनदिनै तर तिनलाई पथप्रदर्शन गर्ने प्रविधि छैन हामीसँग । हातमा दिने पर्चा पनि हुँदैन । कुनै सोधपुछ छैन । यहाँको उजाड र उराठलाग्दो वातावरण देखेर पनि रमाउँदै जान्छन् विचराहरू । हामीले दरिद्रताको परिचय पस्केर अझै कति हात थाप्ने हो ? कि भारत र चीनसँग मिलेर संरक्षण र विकास गर्ने हो ?
वर्तमान भारतीय राजदूत रञ्जित रे नेपाल आउनु अगावै बुद्धिष्ट सर्किटका लागि सहकार्य गर्न सकिने भनेर बताउने व्यक्ति हुन् । भारतमा रहेका बुद्धका सबै धाम र नेपालका धामसमेत समेटेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पर्यटन प्रवद्र्धनको संयुक्त कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । नेपाल र भारतका बीचमा राजनीतिक गतिविधिका कारणले धमिलिएको वातावरण सङ्लो पार्न बुद्ध र बुद्ध जयन्तीको सदुपयोग समयोचित र सही कदम बन्न सक्छ । चिनियाँ तीर्थयात्रीहरू दुवै देशका लागि आकर्षक पर्यटक हुनसक्छन् । गुजरात र बिहारमा चीनले लगानी गर्न हुन्छ भने नेपालमा नहुने कुरै छैन । मिल्ने र मिलाउनेतिर लागे त्रिदेशीय सम्बन्धका मजबुत ऐतिहासिक आधारस्तम्भ हुनसक्छन् गौतम बुद्ध ।